~ ~ ~ @ @ @ ~ ~ ~
(ကြီးမားလွန်းတဲ့ အရင်းအနှီးအတွက် ချွေးသိပ်ပေးတဲ့ ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်
သလောက် ရလာဒ်ကလေးကို တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် ရင်နာစရာအဖြစ်ပါ။
အကောင်းအဆိုး အကျိုးအပြစ်တွေကို ချိန်ဆလို့ အရင်းအနှီးနဲ့ အကျိုးအမြတ်
ရလာဒ်တွေ တူနေခဲ့ရင်တောင် မလုပ်သင့်တဲ့ အဖြစ်မို့ မနှောင်းသေးခင်
ဘ၀မှာ အစားထိုးမရတဲ့ အမေအရင်းရဲ့ မေတ္တာကိုစော်ကား အမေ့ကို
ရက်စက်စွာသတ် အမေ့ရင်ကိုခွဲ အသဲနှလုံးကိုထုတ် ချစ်သူကိုပေးဆက်ဖို့
လုပ်တဲ့ မိုက်မဲလှတဲ့ သားဆိုးသားမိုက်ရဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဖြစ်နေခဲ့ရင် အားလုံး
အတွက် တသက်တာ ကြေကွဲစရာတွေ ဖြစ်နိုင်တာမို့ အချိန်မှီစဉ်းစား ပြင်ဆင်
(ပုံများကို အင်တာနက်ကယူပါတယ်။ Photos credit to Google Image and flicker.com)
http://www.burmariversnetwork.org/burmese/ (English version လဲရှိပါတယ်)
Posted by မအိမ်သူ at 12:00 PM
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်တိုင်ရေး, တဂ်ပို့စ်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ပါသည်...။
ဟုတ်တယ်ဗျာ.... အသွေး ဧရာဝတီကို အတူကာကွယ်ကြရပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်တွေက အရမ်းများတယ်။
September 23, 2011 1:10 PM
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ခြင်းကို ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါသည်..။
အမေ ကမ္ဘာတည်သ၍ စီးဆင်းနိုင်ပါစေ
September 23, 2011 1:52 PM
ဧရာဝတီကို ကျေးစွပ်နေကြတာ ရင်နာတယ်..။
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ခြင်းကို ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါတယ်..။
September 23, 2011 2:00 PM
အမေဧရာဝတီကို ဝိုင်းဝန်း ကာကွယ်ကြမယ်ဗျာ..
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
September 23, 2011 2:02 PM
September 23, 2011 2:51 PM
မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး ကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်ပါသည် ကျေးဇူး
September 23, 2011 3:16 PM
ထပ်တူထပ်မှ ခံစားမိပါတယ် မအိမ်သူရေ..
အမိဧရာဝတီအတွက် ညီညာဖြဖြ ကာကွယ်ကြရအောင်..
မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအား လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်..
September 23, 2011 3:31 PM
သားတို့နဲ့ အတူရှိနေပေးပါအုံး အမေရယ် ။
မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်မှုကို ထပ်တူထပ်မျှ ကန့်ကွက်ပါတယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး အဓွန့်ရှည်ပါစေ ...
September 23, 2011 7:20 PM
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး
အလှတရားတွေနဲ့ ထာဝရ စီးဆင် နိုင်ပါစေဗျာ။
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက် မှု့ကို
ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါတယ် ဧရာဝတီ ဒီအတိုင်းပဲ တည်ရမယ်။
September 23, 2011 9:01 PM
အမေ့ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါ။ ဧရာဝတီ အဓွန့်ရှည်တည်စေသောဝ်...
September 23, 2011 9:51 PM
အမေတစ်ယောက်လို လေးစားချစ်ခင်ဖွယ်ဧရာဝတီကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းတွေနဲ့မှ မပျက်စီး မဆုံးရှုံးစေချင်ပါဘူး
September 23, 2011 11:40 PM
September 24, 2011 12:23 AM
September 24, 2011 12:33 AM
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို လုံးဝလုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်..
အမေ့မေတ္တာတမျှအေးမြတဲ့ ဧရာဝတီ ထာဝစဉ်စီးဆင်းနိုင်ပါစေ....
September 24, 2011 12:37 AM
ဒီပုံတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ရုံနဲ့ တင် ကန့် ကွက်ဖို့ လုံလောက်နေပါပြီလေ...
ဒါကြောင့် ကန့် ကွက်ပါတယ်။။။
September 24, 2011 12:38 AM
ကဗျာထဲက အမိမဲ့သား ရေနည်းငါး ဆိုတဲ့ စကားလေး သုံးထားတာ အရမ်းသဘောကျတယ် မအိမ်သူရေ..၊ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ တိုက်ရိုက် အနက်ကော၊ ဆင့်ပွား အနက်ပါ သက်ဆိုင်တဲ့ စကားလေးပါပဲ၊ နောက်ထပ်တစ်သံ ထပ်တိုးခဲ့တယ်နော်၊ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်..။
September 24, 2011 5:27 AM
ဟုတ်ပါ့ရှင်။ ဧရာဝတီ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ထာဝရတည်ရှိနေပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်း ပြုမိပါတော့တယ်။ ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့လေ။ ဒါပေမယ့်တော့ သူ့ခမျာ ဒါဏ်ရာတွေ ရနေပီ။
September 24, 2011 3:06 PM
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။
အမေကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံပဲ တတ်နိုင်တယ် မအိမ်သူရေ...ဆုတောင်းရုံပဲ တတ်နိုင်တာကိုလည်း စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်မိပါရဲ့...
September 25, 2011 3:37 AM
September 26, 2011 12:16 PM
အတွေ့အကြုံ အပိုင်းအစများ (4)
B – L – O – G – G – E – R
သူမရှိတော့ရင်… (ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တဂ်တဲ့ပို့စ်)
ရကျစကျ နှောငျကွိုးမြား... - ရူးတော့မှာပဲ ငါတို့ ထပျပွီး မဆုံးရှုံးပါရစနေဲ့တော့ လူစငျစဈကွီးတှေ အဖိုးတနျကွီးတှေ အကောငျးစားကွီးတှေ ငါတို့ဆီက ယူသှားသမြှတှေ ပွနျပေးကွပါဟာ ဒီနှဦေးဟာ တဆိ...
Thet Tant Hlwar (သက်တန့်လွှာ)
REST IN POWER - *ယုံကွညျခကျြအတှကျ ​လမျးလြှောကျဆဲ လူငယျလေးတဈယောကျတောကျပဆဲ လငျးလကျဆဲကွယျကကွှခြေိနျမတနျပဲ အကွှစေောလှနျးလို့ကမ်ဘာကွီးဟာ အကညျြးတနျနရေ့ကျတှသော မြာ...
ကွကျတူရှေးတကောငျနှငျ့ စကားပွောခွငျး - ဧညျ့သညျပါလို့ အိမျရှငျက မိတျဆကျပေးတော့မှ သူလညျး ဒီအရပျကိုလာလညျ တဲ့ ဧညျ့သညျပဲ လို့ သိလိုကျ ပါတယျ။ သူတို့အိမျက အခနျး ၃ ခနျး လူ ၃ယောကျနေ ကွတော့ ကနြျောရယျ ဧည့...
နှလုံးသားအိပ်​မက်​ရာဇဝင်​မှာစာတင်​​စေမယ့်​အနမ်း - တမ်းတမ်းတတ ထင်​​ယောင်​မှတ်​မှား ငယ်​ချစ်​ဦးလား ​တွေးအတွင်း ချဉ်းနင်း​ရောက်​လာ သူမမှသူမပါပဲ ရင်​ခွင်​မှာလှိုက်​ကနဲ ​နွေး​ထွေးလှပ်​ခုန်​ လှိုက်​...
The5Commandments of And How Learn More - Factors to Consider when ChoosingaMarriage Counsellor Visitingamarriage counselor does not necessarily mean your marriage has any problems. They are ex...
စာမရေးတော့ဘဲ ပါးစပ်နဲ့ ပြောနေပါတယ် - အင်ထနက်မှာ စာရေးရင် အခိုးခံရလွန်းလို့ စိတ်ညစ်လာပြီး အခု Video Log (vlog) ကို စတင် စမ်းသပ်နေပါတယ်။ https://www.facebook.com/writer.atta.kyaw မှာ ဝင်ကြည့်ရင်...
တခေတ်တခါက မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ ရေးသားကြ၏ - တခါက တခါတုန်းက တခါက တဘဝ တခေတ် တခါက တခါက မွေးဌာနီ တခါက မကြေးစည် တခေတ်တခါက မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ ရေးသားကြ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁၇-၁၁-၂၀၁၉
“ဂျူးရဲ့ ရသခြုံလွှာကို ခံစား၊ဝေဖန်ခြင်း” - ဂျူး၏ #သက်တံတို့ဖြင့်ရက်ဖွဲ့ ချစ်သူရဲ့ခြုံလွှာကို ဝေဖန်ညွှန်းဆိုချက် (ရွှေအမြုတေ၊ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီးသည့် ဆောင်းပါး) —————- “ဂျူးရဲ့ ရသခြ...